Nyocha Oranum - Akwụkwọ ọgụgụ isi na ntanetị
Ịgụ akwụkwọ ọgụgụ mmụọ nke oge a > Oranum Review
Nyochaa Oranum dum
Oranum malitere n'oge na-adịbeghị anya ịmalite ịgụ akwụkwọ ọgụgụ isi na United States, agbanyeghị na ha na-enye akwụkwọ na mba ha nke Poland ruo ọtụtụ afọ. Oranum pụrụ iche na ha na-enye naanị webcam dabeere ọgụgụ. A makwaara dị ka "video nkata." Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị igwefoto weebụ ma ị nwere ike ịgụ akwụkwọ, ịnwere ike ịjụ ajụjụ gị site na ịpị ha n'ime igbe nkata, mana ọ bụrụ na ị nwere kamera igwe okwu na igwe okwu ị nwere ike ịgwa onye na-agụ akwụkwọ ọgụgụ isi gị okwu nke na-eme ngwa ngwa. , Echere m na ọ bụ ezigbo nkà na ụzụ. Otutu ihe uche m kwuru bu ezi okwu ma nye m ezigbo ndumodu.
Ha nwere usoro nyocha dị mma maka psychics, ọ bụ ezie na ọ ka dị mma Isi ihe omimi or Jụọ. Enwere m ntakịrị iwe na ha enweghị nkwado ndị ahịa ekwentị. Nke a kwesịrị ịbụ ihe achọrọ maka azụmaahịa ọ bụla. Achọpụtara m na nkwado ndị ahịa email ha zara na-erughị otu awa mana ọ nweghị ihe dịka ịnwe ike isoro onye dị ndụ kwurịta okwu iji dozie nsogbu gị ọsọ ọsọ. N'ozuzu Oranum nwere teknụzụ dị jụụ, usoro nyocha nke mmụọ ọgụgụ isi mana ọrụ ndị ahịa ha enweghị nnukwu oge.
Oranum malitere n'obodo ha nke Poland. Na 2010 ha kpebiri ịbawanye na United States. Ha na-emeghe ọnụ ụzọ ha maka ndị ahịa US n'April 2011. Ha bụ ndị mbụ, ọ bụ naanị weebụ-cam dabeere na nkà mmụta uche na-arụ ọrụ ọ bụla.
Usoro nyocha nke mmụọ nke Oranum dị ezigbo mma. Ha nwere otutu ezigbo uche, ma o dikwa nma dika ufodu ndi ozo ndi ozo. Ndị na-agwọ ọrịa uche na-eme usoro nnwale siri ike tupu ha enwee ike ịgụ na Oranum, mana ọ dị m ka ọ siri ike ma ọ bụ kewaa ya. Ikwesiri ịkpachara anya banyere Psychics ị na-agwa okwu na Oranum.
Enwere m mmasị na weebụsaịtị Oranum. Ọ dị mfe ịnyagharịa na ị nwere ike ịchọ ma dozie Psychics mfe. Inwe ike ikiri vidio site na psychics tupu ị nweta ọgụgụ dị egwu ma mee ka ị nwee mmetụta nke mmụọ tupu ị kpebie ịkpọtụrụ ha. You nwere ike ịlele nhazi oge nke Psychic na ọbụnakwa ịtọọ onwe gị ọgụgụ na usoro ọgụgụ isi ọ bụla.
Oranum anaghị enye ego maka ndị ahịa ọhụụ, mana ha nwere ụzọ pụrụ iche iji hapụ gị ịnwale ọrụ ha. Site na ngwanrọ nkata vidio ha ị nwere ike ịkparịta ụka na ntanetị ọ bụla n'ịntanetị, na-akwụghị ụgwọ ọ bụla ogologo oge ịchọrọ. Ọ bụrụ n'ikpebie masịrị gị mmụọ ahụ, ị ​​nwere ike ịkwụ ụgwọ ka ị gụọ ya. Echere m na nke a dị mma nke ukwuu ma na-enye gị ohere inwe ezi mmetụta maka mmụọ ị na-achọ ịkwụ, tupu ị kwụọ ụgwọ. Agbanyeghi na enweghi ego enwere m obi uto na nke a bara oke uru nke na ichoghi onu ego.
Enweghị nkwado ekwentị na-echu m ụra. Ekwenyere m na azụmahịa ọ bụla kwesịrị ịnwe nọmba ọrụ ndị ahịa ekwentị dị mma. Oranum na-enye nkwado ndị ahịa email, ha zaghachikwara ngwa ngwa mana ọ bụghị otu ihe ahụ ịnwe ike ịwelite ekwentị ma soro ezigbo mmadụ kwurịta okwu. Ọ bụrụ na Oranum jiri teknụzụ igwefoto ha maka ọrụ ndị ahịa, m ga-enwe ọ happyụ n'ezie.